नेपालमा बिक्रीको लागि निबन्ध
लुकेका भुक्तानी बिना तपाईको व्यक्तिगत निबन्ध बिक्रीको लागि। बेलायत र अमेरिकी नेटिभ स्पिकरहरूको नेपाल कस्टम निबन्धहरूमा अर्डर गर्नुहोस्। २//7 समर्थन, नि: शुल्क संशोधन र छोटो समयमा उच्च-गुणवत्ताको काम गर्दछ
किन कस्टम शैक्षिक निबन्धहरू तपाईंको कलेज डिग्रीहरूको लागि आवश्यक छ
जो बिक्री को लागी निबंध अर्डर छैन, को लागी उनीहरू आफ्नो कार्य को लागी धेरै तिरेको छ। यो हेर्न सजीलो छ किन। यी धेरै 'सेवा' कम्पनीहरूले निबन्धको लागि १०० डलर भन्दा माथि लिन्छन्। यदि तपाईंलाई निबन्ध मूल्य निर्धारणको बारे केही थाहा छ भने, तपाईंलाई थाहा हुन्छ कि यो सरासर हास्यास्पद हुन सक्छ। यो लेखमा हामी तपाइँलाई तपाइँको कलेज निबन्धमा बिक्रीको लागि पैसा कसरी बचत गर्ने भनेर देखाउँदैछौं।
त्यहाँ केहि कम्पनीहरू छन् जुन अनलाइन बिक्रीको लागि निबन्ध प्रदान गर्दछ र व्यावसायिक सेवा प्रदायक भएको दाबी गर्दछ। तपाईं यी प्रकारका कम्पनीहरूसँग काम गर्न चाहनुहुन्न। किन? किनकी जब तपाइँ एक अनलाइन स्टोर बाट एक उत्पादन को क्रम मा, ग्राहक सेवा सबैभन्दा ठूलो छैन। सँधै याद राख्नुहोस् कि सस्तो मूल्य सधैं उत्तम गुणस्तर हुँदैन, त्यसैले सँधै महान् ग्राहक सेवा प्रदान गर्ने कम्पनीहरूबाट बिक्रीको लागि तपाइँको निबन्धहरूको आदेश दिनुहोस्।
अब, तपाइँ कसरी एक महान निबन्ध सेवा प्रदान गर्ने कम्पनी को लागी खोज्नुहुन्छ? उत्तम तरीका भनेको कम्पनीहरूको खोजीमा सुरू गरेर जुन उनीहरूका निबन्धहरू ठूलो संख्यामा बिक्रीको लागि बेच्छन्। अर्को शब्दमा, तिनीहरूसँग एउटा सानो कुना हुँदैन। तपाईले यो सुनिश्चित गर्न चाहानुहुन्छ कि तपाईले पठाउनु भएको कम्पनीको देशव्यापी उपस्थिति छ।
कसरी ठूलो कम्पनीले यो निश्चित गर्दछ कि यसले बिक्रीको लागि यसको निबन्धको लागि धेरै चार्ज गर्दैन? यो सुनिश्चित गर्दछ कि यो एक विशाल ग्राहक आधार छ। यसको मतलव तपाईले कुनै पुस्तक, सीडी, वा कुनै पनि अन्य प्रकारको शैक्षिक आपूर्ति, जब तपाईं अर्डर गर्नुहुन्छ, तपाईं तिनीहरूको लागि पैसा बनाउँदै हुनुहुन्छ। र शैक्षिक लेखन को व्यवसाय मा, साहित्य चोरी एक गम्भीर चिन्ता हो।
अब तपाईंलाई थाहा छ किन यो महत्त्वपूर्ण हो भन्ने कुरा निश्चित गर्नका लागि कि तपाईं एक विश्वसनीय कम्पनीसँग काम गर्दै हुनुहुन्छ जुन राष्ट्रव्यापी उपस्थिति हो, तपाईं सायद सोच्दै हुनुहुन्छ कि कसरी तपाईंको कलेज निबन्धमा बिक्रीको लागि अनलाईनमा उत्तम मूल्य पाउने भनेर। राम्रो समाचार यो छ कि त्यहाँ बाहिर कम्पनिहरु छन् कि क्याम्पस किताब पसल मा उनलाई किन्न सक्छ भन्दा कम मा तपाइँको कलेज निबन्ध बेच्ने छ। नराम्रो समाचार यो हो कि तपाइँ निबन्धहरू अनलाइन किन्नुहोस् भनेर धेरै सतर्क हुनुपर्दछ। त्यसोभए किन त्यो हेरौं।
सबै भन्दा पहिले, शाब्दिक हजारौं कम्पनीहरू छन् जुन कलेजको लागि पूर्व-लिखित निबन्धहरू बिक्रीमा विशेषज्ञ छन्। यि धेरै कम्पनीहरू सीधै प्रतिस्पर्धी हुन् हाम्रो कागजको खण्ड को आधार मा प्रत्येक वर्ष र हाम्रो विद्यार्थीहरु द्वारा लिखित कागजात संख्या। र यी सबै बेइमान कम्पनीहरू छैनन्। त्यहाँ केहि सम्मानित कम्पनीहरू छन् जो केवल निबन्ध लेखनका लागि उच्च गुणस्तरका निबन्धहरू बिक्री गर्छन्।
यी ती कम्पनीहरू हुन् जुन तपाईं आफ्नो कलेज निबन्ध खरीद गर्न चाहानुहुन्छ। यी ती हुन् जुन तपाईलाई विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ तपाईलाई सेवा प्रदान गर्न जुन तपाईको विद्यार्थीको रूपमा तपाईको आवश्यकतालाई पूरा गर्दछ। यी ती कम्पनीहरू हुन् जसले वास्तवमै तपाईंलाई तपाईंको क्यारियरलाई दायाँ खुट्टामा शुरू गर्न मद्दत गर्दछ, तपाईंलाई तपाईंको असाइनमेन्टको लागि अनुकूलित पूर्व-लिखित कलेज निबन्धहरू प्रदान गरेर। त्यसोभए तपाईको कम्पनीबाट कस्तो प्रकारको सेवाको आशा गर्न सक्नुहुन्छ?
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा जुन तपाई यी कम्पनीहरूबाट आशा गर्न सक्नुहुन्छ कि त्यो उनीहरूले तपाईंलाई कस्टम लिखित कलेज लेख प्रदान गर्दछ जुन तपाईंको आवश्यकता अनुसार मिल्छ। तपाइँ वास्तवमा तपाइँको असाइनमेन्टको लागि तपाइँलाई चाहिने सटीक कागज सामग्री निर्धारण गर्न व्यक्तिगत मद्दत प्राप्त गर्नुहुनेछ, जुन त्यसपछि तपाइँको विशेष रूपमा निबन्ध सिर्जना गर्न प्रयोग गरिने छ। यस कस्टम निबन्ध सामग्रीको साथ यी कागजातहरू लेख्ने सब भन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष मध्ये एक आउँछ - प्रुफरीडिंग। पूर्व-लिखित शैक्षिक निबन्धमा विशेषज्ञता कम्पनीसँग काम गरेर, तपाईं उच्च गुणवत्ताको आश्वासन पाउनुहुनेछ - कागजातको सामग्री पूर्णतया सहि र अप-टु-डेट हुनेछ भन्ने आश्वासन।